Video2Webcam v3.3.0.2 + Keygen...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ Video2Webcam လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင်လို့တင်ပေးလိုက်ရတာပါ...! Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...! ဒီကောင်းလေးတွေကို Support ကောင်းကောင်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...!
(avi, asf, flv, mp4,mpeg, mpg, ram, rm, rmvb, wmv ) နောက်ပြီး Picture Formats အနေနဲ့လည်း (jpg, gif, bmp, png ) ကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...!နောက်ပြီးတော့ · MSN, Camfrog, Skype, ICQ, AIM, Paltalk, Yahoo Messenger, Vzo တွေမှာလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့ 5.42MB ပဲရှိပါတယ်...!အသုံးလိုတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "Video2Webcam v3.3.0.2 + Keygen...!"